Masuuliyiin dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho – Kismaayo24 News Agency
by admin 8th January 2020 0268
Masuuliyiin ka tirsan dowlada federaalka Somalia ayaa la xaqiijiyey iney ka mid noqdeen dhowr qof oo dhimasho iyo dhaawac ay ka soo gaartay qarax loo adeegsaday gaari miineysan oo maanta ka dhacay isgoyska Sayidka ee magaalada Muqdisho.
Agaasimihii maamulka iyo Maaliyada ee Wasaarada haweenka xukuumada Somalia Bile Ismaaciil ayaa la xaqiijiyey inuu ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxa maanta.
Sidoo kale wararka ayaa sheegaya in dhaawac culus uu soo gaaray Ku-xigeenka xoghayaha guud ee Aqalka sare ee Baarlamanka Somalia, kaasoo la dhigay isbitaalka Digfeer oo xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo.
Gaadiid ay wateen masuuliyiintan ayuu qaraxu ku qabsaday kontrolka sayidka oo ka mid ah kontrolada laga ilaaliyo xarunta Madaxtooyada Somalia xili ay saf ugu jireen in la hubiyo aqoonsigooda si ay halkaas uga gudbaan.
Ugu yaraan sadex ruux ayaa ku dhintay qaraxan halka lix kale ay ku dhaawacmean sida uu sheegay afhayeenka Maamulka gobolka Banaadir Saalax Dheere oo la hadlay saxaafada inkastoo uu sheegin dhimashada iyo dhaawaca masuuliyiintan.
Gudoomiye Mursal oo Gudbiyey Qaabka Doorashada Kuraasta Somaliland.
Wufuud cusub oo ku so biirtay Shirki Kismaayo iyo wararki ugu danbeeyay ee shirka
admin 10th March 2016 11th March 2016
Daawo: Dowlada turkiga oo saldhig weyn ka dhistay deegaanka jazeera ee duleedka muqdisho maxaase loogu tala galay??
Tifaftiraha K24 15th March 2017
Dhageyso: Mooshin deg deg ah oo laga keenay saldhigga imaaraadka carabta uu ka dhisanaayo berbera iyo xildhibaanada oo…..